पुननिर्माणमा चुनौतीका चाङ, प्राधिकरण सिइओ भन्छन् ः एक्सनमा जानुपर्छ « Bizkhabar Online
पुननिर्माणमा चुनौतीका चाङ, प्राधिकरण सिइओ भन्छन् ः एक्सनमा जानुपर्छ
21 August, 2015 8:33 pm
४ भदौं, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हालै नियुक्ती भएका प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले पुननिर्माणमा चुनौती नै चुनौतीको चाङ रहेको बताएका छन् । उनले अहिलेको अवस्थामा पुननिर्माण निकै चुनौतीपूर्ण रहेको औल्याएका हुन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले शुक्रवार काठमाडौमा आयोजना गरेको कार्यक्रमा बोल्दै उनले हुनभुकम्पले सामाजिक विकास तथा आर्थिक संमृद्धिको अवसर समेत दिलाएको भएपनि यो काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । खासगरी जनशक्ति तथा निर्माण समाग्रीको अभाव, विद्यमान प्रक्रिया तथा प्रणाली, कम गर्न नसक्ने क्षमता, सामाजिक मेलमिलापलगायत विषयले पुननिर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाई छ । पुननिर्माणका लागि प्राधिकरण र फिल्डमा जानै दुवै किसिमको मानवशक्ति चाहिएको उनले बताए । त्यस्तै, सरकार, निजी क्षेत्र र दाताहरुबीचको समन्वय पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । उनले सामाजिक मेलमिलाप बिना पुनर्मिाण सम्भव नहुने भन्दै यसका लागि सचेत गराए । ‘अहिले जातिय, धार्मिक तथा वर्गीय समन्वय तथा साथ सहयोग बढेको छ’ उनले भने, ‘यसले समान विकास गर्दैन, समाजमा मेलमिलाप गराउँदैन ।’
सोही अवसरमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि पुननिर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको औल्याए । यद्यपी पुननिर्माणको काम भने शुरु भइसकेका उनले बताए ।
कार्यक्रममा एसीयाली विकास बैंकका कण्ट्रि डाइरेक्टर केनिजी योकोहामाले सवैले मिलेर पुननिर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले पुननिर्माणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच उचित समन्वयनको खाचो रहेको औल्याए ।